Muxaadaraadkii shalay ay culimadu ka jeediyeen Mutamarkii Islaamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Portelizabeth (Dhagayso)
Portelizabeth:-Waxaa wili ku sugan magaalada Portelizabeth ee dalka south Afrika culumadii Nadwada diiniga ahayd ka waday Magaalooyinka Johannesburg,Captown waxayna maanta muxaadarooyin kala duwan ay u jeedsheen jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaalada Portelizabeth waxaana darsigii koowaad galay Sheekh Maxamed Cabdi Umal.
Sh.Maxamed Cabdi Umal ayaa waxaa uu muxaadaradiisa uga hadlay Ilaalinta Dhiiga Muslinka iyo xurmada uu leeyahay qofka Muslinka isaga oo Sheekha soo sardiyey xujooyin badan waxaana ay ahayd muxaadaradii maanta mid aad u kulul oo uu Sheekha daboolka kaga qaaday kuwa dhiiga Muslinka ah maaro looga la,yahay iyo halka ay ka soo biyo cabeen.
Hoos ka Dhagayso Muxaadaradii Sh Umal ee Ilaalinta Dhiiga Muslinka ah
Halkaan ka rogo muxaadarada
Dadweynaha Dhageysanayey Muxaadarada Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa waxaa ay si weyn ay ugu riyaaqeen sida wanaagsan ee uu sheekh Maxamed Cabdi Umal u bayaaniyey khatarta ay leedahay in la daadiyo dhiiga Muslinka.
Muxaadarada labaad ayaa waxaa jeediyey Sheekh Cali Wajiis waxaana uu ka hadlay sifaadka xusnul Khitaam haddii alle idmo.
Hoos ka Dhagayso Muxaadarad Sh Cali Wajiis ee sifaadka xusnul Khitaam
Culumada ka qeyb gashay Mutamarka ka socda magaalada Portelizabeth waxay kala yihiin.
4-Sheekh Cali Maxamuud Xassan
5-Sheekh Dr.Ahmed Daahir Aweys
Halkan Ka Dhageyso Muxaadarooyinkii ay culumada ka jeedsheen magaalada Johannesburg
Halkan Ka Dhageyso Muxaadarooyinkii ay culumada ka jeedsheen Magaalada Portelizabeth
Halgan.net ayaa idiin soo gudbin doonta hadii alle idmo muxaadarada Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo Sheekh Cali Wajis hadii alle idmo .
masha’alah sidaytahay ayuu ugahadalay in aan ka dhagaystay sh umal
mashaa alaah ha xifiya sheekhana shekh maxamed cabdi umal